Xawaaraha dib-u-warshadeeynta qalabka xawaaraha Wejiga Gearheads ee sicirka qiimaha jaban ee Warshadaha
Xawaaraha dib-u-warshadeeynta xawaaraha ku iibinta wershadaha qiimaha jaban
Waxaan ku bixinaa santuuqa qalabka xawaaraha sare ee xawaaraha sarreeya oo ku kacaya qiimaha ugu wanaagsan.
Xawaare jaban oo xawaare sare ku socda ayaa laga helayaa Gearbox
Waxaa jira xulashooyin badan oo sanduuqyada gearbox-yada iyo xawaaraha yareeyayaasha ah ee barnaamijyo kaladuwan oo aad u tiro badan kuwaas oo u baahan awood dherer sare iyo xawaare gaabis ah. Dhamaan Hoos u Dhigeyaasha Gudbinta waxay leeyihiin tayo iyo awood aad u fiican. Ka hel heshiisyada ugufiican Warshadaha Gearboxesyada & Xawaareyaasha Xawaaraha.
Ka waran xawaaraha dhimista xawaaraha?
Qalabka dixiriga dixiriga ah ee dirxiga, oo laga heli karo darawal toos ah ama aan toos ahayn, ayaa loo adeegsadaa codsiyada faras hoose oo dhexdhexaad ah si loo yareeyo xawaaraha loona kordhiyo xaddiga. 5000-dhimista xawaaraha dixiriga dirxiga saddex-jibbaar ayaa laga heli karaa saamiga laga soo bilaabo 1: 175000 illaa 1: 7 iyo masaafada u dhexeysa 20 ”illaa XNUMX”. Mashiinka matoorrada xagal-midig iyo yareeyeyaashu waxay soo bandhigaan qalab casri ah oo wax ku ool ah. Raadi sanduuqa yareynta qalabka dhimirka, qalabka wax yareeya qalabka wax lagu jaro, kuwa hoos u dhiga xawaaraha bidaarta & waxyaabo badan oo cabbirkoodu kala duwan yahay.
Waa maxay ujeedadu iyadoo la adeegsanaayo qalabka loo yaqaan 'Speed ​​revenueer gearbox'?
Marka loo barbardhigo dhimista Xawaaraha Sare ee Xawaaraha, Xawaaraha dib-u-habeeynta qalabka loo yaqaan 'Speedbox gear gear' waxaa loo isticmaalaa in lagu yareeyo xawaaraha soo-galinta, laga bilaabo mootada ama xoogaa wadooyinka, halka sidoo kale lagu dhufto qiyamka 'torque' qiimaha soo-galaya illaa xarkaha soo-saare soo-saaraha xawaaraha ama habka wadista Waxaan ku soo saareynaa noocyo kala duwan of xawaaraha dhimista, loogu talagalay in lagu kordhiyo torque iyo yaraynta xawaaraha culeyska ee matoorradaada korantada. Waxay siisaa tayo sare, badeecado qiimo jaban. Markaad naqshadeynayso xawaare dheereeye, dhib malaha dalabka. Si kale haddii loo dhigo, Qalabka wax lagu habeeyaa wuxuu kordhiyaa qulqulka biyaha wuxuuna yareynayaa xawaaraha gawaarida. Qalabka korantada qulqulaya ayaa siinaya xarummo dhex-dhexaadin leh oo leh nooc qaabeynta nooca oo loogu talagalay dabacsanaanta naqshadeynta nidaamka iyo xulashooyinka kaydinta meel bannaan. U hel makiinada qalabka korantada ku shaqeysa ee korantada ku dhexjirta 45 alaabooyinka laga soo qaado suuqyada china.
Tixraacyo Qaar ka mid ah Sanduuqa Qalabka Xawaareha Xawaaraha.
Xawaare dhimis Gearbox
Tixraacyada Qaar ka mid ah Alaabooyinka Gudbinta Awooda Dheeraad ah
Haddaad rabto inaad ka hesho heshiisyada ugu fiican xawaaraha qalabka wax ka beddela xawaaraha
Halkan ayaan ku sugeynaa.
Gawaaridayada ayaa soo saarta nooca nooceeda iyo dixiriga goy-yareynta (qoryaha) qalabka loo yaqaan 'gearmotor'. Waxaan diyaar u nahay isla markaana sugeynaa iskaashigeenna. Waxaan u qaadanaa tayo ahaan sida faa'iidada iyo qiimaha ugu hooseeya sida daacadda.
Fadlan xor u tahay inaad nala soo xiriirto oo halkaan soo socota waa xiriiradaheena. Waxaan kugu soo jawaabi doonaa sida ugu dhaqsaha badan!
E-mail: [emailka waa la ilaaliyay] Aqoonsiga Skype: qingdao411